Last updated at: 22.02.2012 06:30
လေ့လာမှု့အသစ်တခုအရ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်နှုန်းများလာနေပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဖွံဖြိုးပြီး ချမ်းသာတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဒီကင်ဆာကြောင့် သေနှုန်းကတော့ ကျဆင်းလာနေပါတယ်၊ အကြောင်းက ဒီနိုင်ငံတွေမှာ ရင်သားကင်ဆာဆိုင်ရာ ဓာတ်မှန်ရိုက် ဆေးစစ်နိုင်တာနဲ့ ဆေးကုသမှု့တွေကို လက်လှမ်းမှီနိုင်တာတွေကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၊ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့ ရင်သားကင်ဆာကြောင့် သေနှုန်းမြင့်မားလာနေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်က ဆိုပါတယ်။ဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံတခု ဖြစ်နေသေးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရင်သားကင်ဆာဟာ သားအိမ်ကင်ဆာပြီးရင် ဒုတိယအဖြစ် အများဆုံး ကင်ဆာဖြစ်တယ်၊ သေနှုန်း အတိအကျ မသိသေးပေမဲ့ စောစောသိရင် အများစုကို လုံးဝပျောက်သွားအောင် ကုပေးနိုင်တယ်လို့ မြန်မာကင်ဆာ အထူးကုတွေက ဆိုကြပါတယ်။ အခုလို စောစောသိအောင် ဘာတွေ သိဖို့၊ လုပ်ဖို့ လိုပါသလဲ။ဒါ့အပြင် ရင်သားကင်ဆာက သားအိမ်ကင်ဆာနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ကာကွယ်ရ ခက်ပေမယ့်၊ ဒီရောဂါအဖြစ်များစေတဲ့ အကြောင်းတွေကို သိထားရင်တော့ ကာကွယ်ရေးအတွက်လည်း ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို VOA သတင်းထောက် Vidushi Sinha သတင်းပို့ထားတာနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ကင်ဆာအထူးကု နဲ့ အငြိမ်းစားပါမောက္ခ ဆရာဝန်ကြီး ဦးစိုးအောင် တို့နဲ့ မေးမြန်းထားတာတွေကို ကိုဝင်းမင်းက စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။
This forum has been closed. Comments There are no comments in this forum. Be first and add one နေ့ စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၅-၂၁-၂၀၁၃) နေ့ စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၅-၂၁-၂၀၁၃)
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ အမေရိကန် သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့ ပူးတွဲ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင် မင်းကိုနုိုင် ၊ ကိုကိုကြီးတို့နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း၊ မြန်မာ့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အခြေအနေ စသည် ... ထိပ်တန်းသတင်းများ Oklahoma လေဆင်နှာမောင်း လူ ၅၀ ကျော်သေဆုံး မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှု ပြစ်ဒဏ်များ ဆက်လက်ချမှတ် မြန်မာနိုင်ငံ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အမေရိကန် အထောက်အကူပေးမည် အစ္စလာမ်ဘော်ဒါဆောင်ကျောင်း မီးရှို့ခံရမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ PHR အဖွဲ့ တောင်းဆို မြန်မာ့ပညာရေး အထောက်အကူပေးဖို့ သမ္မတ ပန်ကြား ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် စိုးရိမ်ရတဲ့နိုင်ငံတွေစာရင်းထဲ မြန်မာပါဝင် အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အိမ်ဖြူတော်ပူးတွဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မြောက်ကိုရီးယား တာတိုဒုံး ၂ စင်း ထပ်မံပစ်လွှတ် အစ္စလာမ်ဘော်ဒါဆောင်ကျောင်း မီးရှို့ခံရမှု စုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ PHR အဖွဲ့ တောင်းဆို ABSDF နဲ့ မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေး ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် စိုးရိမ်ရတဲ့နိုင်ငံတွေစာရင်းထဲ မြန်မာပါဝင်အများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများNo itemsအများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများ နေ့ စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၅-၂၁-၂၀၁၃) သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် ခရီးစဉ် အပေါ် မင်းကိုနုိုင် အမြင် အိမ်ဖြူတော်ရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် ခရီးစဉ် အပေါ် ကိုကိုကြီး အမြင် သမ္မတ အိုဘားမားနဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပူးတွဲ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ကမ္ဘာ့သတင်း စက္ကန့် ၆၀ VOA60 World